Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Madaxweyne xigeenku Saamayn kuma leh waxa Saylac ka socda, waa arin Siilaanyo iyo gacanyarayaashiisa u gaar ah, Isagu wuxu ku mashquulsanyahay……..
Madaxweyne xigeenku Saamayn kuma leh waxa Saylac ka socda, waa arin Siilaanyo iyo gacanyarayaashiisa u gaar ah, Isagu wuxu ku mashquulsanyahay……..
Dec 28, 2012 SOMALI NEWS 3
Inta gacan ku haynta saylac la isku haysto CraxmaanSaylici wuxu ku mashquulsanyahay sidii uu Mid jufadiisa ah u meelayn lahaa!!! marka aad eegto mansabka iyo darajada kursiga uu ku fadhiyo iyo sida uu u madhanyahay isma leh.
Ma odhan karno dibin daabyo ayuu ku hayaa dadaalada Saylac loogu jiro, laakiin waxay ahayd inuu dadaal dheeri ah iyo saamayn muuqata la yimaado. Wuu jecelyahay in inadeerkii Maayer ka noqdo Saylac laakiin raganimadeedii ma leh. Wixii Siilaanyo yidhaahdo uunbuu fulinayaa, wixii la inoo sheegayay oo dhamina waa been aan sal iyo raadtoona lahayn.
Inta Samaroonna dal iyo dibad qaylo dhaaminayo Isagu mid jufadiisa ah ayuu meel banaan u raad raadinayaa, Dhawal iyo Samatar iyo Isaguna waa isku aragti.
Wali ma hayno Saylici oo la kulmay cid ka hadlaysa qaddiyada Saylac oo labada dhinac ee arrinku dhexyaalo ah, xataa waxgaradka beesha Samaroona dhahoo.
Craxmaan saylici wuxu Boorama yimid sadex maalmood ka hor xaaladda degmada Saylac oo cakiran oo dadku sara joogo, Inta uu wiilkiisii gabadh u doonay ayuu dib ugu noqday Hargeysa. Oday iyo aqoonyahan, Haba yaraatee cid uu arrinkaa kala sheekaystay ma jirto.
Markii xubnaha labada gole kaga jira Gadbuursigu ay la kulmeen Siilaanyo waxay waydiiyeen fariintii uu ka keenay Jabuuti ee ay dooddu ku dhexmartay ku xigeenkiisa, Siilaanyo wuxu sheegay inaanay habayaraatee jirin wax ay kuxigeenkiisa ka wada hadleen.
Markii ay taasi soo baxday ee warkii Saylici beenoobay waxay taageerayaashiisu suuqa galiyeen Siilaanyo xasuustaa ka luntay!!!
Waxa la yiri Meyd maxaa u dambeeyay, kaa la sii sido. Waftiga Saylac u baxay waxa diray Siilaanyo, waxay ku socdaan amar Siilaanyo siiyay, kuxigeenkiisu shaqo kuma laha. Waa suurogal wixii uu dhega dhegeeyo inuu soo tabiyo, laakiin Xaqiiqda biyo kama dhibcaanka ahi waa inuuna Saylici saamayn ku lahayn Arrinka degmada Saylac ka taagan, taladuna gacanta siilaanyo iyo gacanyarayaashiisa ay ku egtahay, xaqiiqdu hortiinay iman doontaa.
Inta gacan ku haynta saylac la isku haysto Saylici wuxu ku mashquulsanyahay sidii uu Mid jufadiisa ah u meelayn lahaa oo mid beel kale kasoo jeeda oo xil ka haya Awdal uu inadeerkii ugu bedeli lahaa !!! Waxanan idiin soo gudbin doonnaa macluumaad dhamaystiran marka ay xamaasadda iyo xumadda Saylac degto.
Madaxweyne Xassan “Ma’istiri Wali Lama qabsan Hab maamuuskii Baratakoolka Madexweynanimo” Faallo: Saylici Maxaa Lagu Amaanayaa Ee Muuqda Maxaase Ina Awcali Loogala Bakhaylay Guulihii Uu Reer Awdal Usoo Hooyay 90dii?
3 thoughts on “Madaxweyne xigeenku Saamayn kuma leh waxa Saylac ka socda, waa arin Siilaanyo iyo gacanyarayaashiisa u gaar ah, Isagu wuxu ku mashquulsanyahay……..”
jibril 12/29/2012 at 10:57 am
Horta u malayn maayo inuu Zaili (Saylic) nin fula’a yahay, laakiin waa nin isku haysta inuu shaqaale yahay. Wuu iloobay in uu yahay Madaxweyne ku Xigeen la soo doortay oo Siiraanyo ayaad sheegaysaaye Baarlamaanku ma eryi karo, ninkani doorasho ayuu ku yimid xilkan ku hayaa. Laakiin maxay kuugu taalaa waa (Dameerkii Dahabka siday) oo kale, muxuu ka og yahay waxa uu sido waaba dameere.
Waxaan leehay Waar Maxamed Casaw maantay idiinku dhawdahay inaad dhulyeelataan, aaway Ragii Maxamed Case ee xinka badnaa, aawey niman koodii Dawladda Mucaaradka ku ahaa oo uu hormoodka kayaha Mr. Axmed Sh. Daahir iyo ragii la mid ahaa.
Ina Haamud Jibriil na waxaan leehay markii horaba shaqada laguu dhiibay islaan baa lagu hoos dhigay maanta sharaf bay kuu tahay hadaad arinta tolkaa darteed shaqada lagaga eryo. Maanta waa maalintii la is xiniin taabanayay.
Xaliimo 12/29/2012 at 3:56 am
saylici karamo iyo karti daraadiisu waa ta lagu xushay waligay qof ka jilicsan cismaan naagodna dhee oo ma arag. wa nacas nacas ka tagay ooo hadana been badan wa bakhti hadana nool karti xumo iyo wuxuu isku darsaday cunsuri nimo meel gadhayn. reerkisa ma soo dhafi karo
Omar 12/28/2012 at 5:43 pm
Waa runtaa Gadabuursi ninkii ugu jilicsanaa (Saylici) ayuu Siilaanyo kasoo xushay, laakiin anigu mar hore ayaan jinaasadiisa kutukaday ee inaga daaya warkiisa ciil iyo calool xumo uunbuu dadkeena damiirka leh uu kaqaadi. Maalinta xilka laga qaado ee uu Borama yimaado tolow maxaasugaya! Hadii maanta uun ficil uu iska baar-baaro oo arintaa Saylac uu mawqif adag kaqaato waligii magaca weyn bay u noqon laheed isaga ciyaalkiisa laakiin ma nin Ilaahay bahdilayo baad karaamo u heli.
War bal maanta uun xiniinyo iska baar oo Silaanyo iska celi. Fuloow guuli kuudhawaydaa.